トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Tombontsoa sy ny fatiantoka ny hetsika mikendry modely ny pachinko trano izy
Ao amin'ny hetsika latabatra, dia marina fa na dia nieritreritra pachinko parlors mety manaiky noho ny mahazatra. Na izany aza, dia midika izany fa ny sehatra iray manontolo ho toy izany fanitsiana dia tsy mazava ho azy. Ao amin'ny fotoana ny hetsika, isika dia hijery ny tombony sy ny fatiantoka ho modely namely ny hetsika. Raha niresaka momba ny fatiantoka ny
hetsika modely, hetsika modely raha ny zava-nitranga dia izany no toetry ny fanarenana milina.
izany, eo ambanin'ny toe-javatra ara-dal?na, dia hita matetika raha manana modely izay tsy manana tena nihazakazaka ao amin'ny hetsika ny modely. Fa ny modely tsy misy ara-dal?na mandritra ny fandidiana, manana raharaha ny amin'ny famerenana amin'ny milina mba piggyback nihazakazaka-maso ny zava-nitranga. Ankoatra izany, ao amin'ny raharaha izay ratsy onja, satria tsy ara-dal?na manodidina ny fotoana, ka mety ny fampiasam-bola fa mitombo. Mijery ny
ohatra fantsika fanitsiana, dia mety ho mora ny hahatakatra tsara indrindra.
naninjitra be loatra sy ny hetsika tepid modely, fantsika fanitsiana tamin'ny fotoana ny zava-nitranga modely izay heverina ho sitrana tanteraka milina, na natao ihany no mihira ny zava-nitranga tao amin'ny fanjakana ara-dal?na tsy tampering na inona na inona, azo inoana fa ny hijoro miraikitra amin'ny voalohany ihany, ary na ny kely ihany no hanokatra, ny fantsika efa niova ho ny iray na roa.
nandritra ny zava-nitranga, satria ny hevitra raikitra fa ho faty tsy misy tanteraka, dia maz?na ny vola nanenjika ny mihoatra noho ny mahazatra. Ao amin'ny pachinko lafiny efi-trano, fa ny tanjona.
raha toa ny fantsika dia mafy, ny hetsika dia nisoroka modely, dia soso-kevitra izay namely ny modely azo antoka, toy ny peta-drindrina maodely. Ka tsy antonona ho toy izany hetsika demerit modely, azafady mamantatra ny mijery tsara ny mahazatra fantsika fanitsiana.
Noho izany, raha niresaka ny manaraka fahamendrehana, dia ny toetry ny fomba misokatra tanteraka ny hetsika modely amin'ny fotoana ny zava-nitranga dia faty ao amin'ny mafy. Koa satria ny zava-nitranga, handeha aho mba hiezaka ny Hanompo amin'ny pachinko parlors. Indrindra indrindra, na manana milina vaovao ao amin'ny hetsika ny modely, raha manana quasi-Xintai modely sy famantarana modely ao amin'ny hetsika modely, dia azo lazaina ho mikendry modely voalohany.
_x00 Tsy 0D_ hoe nahoana no toy izany modely Ahoana raha ny tanjona hetsika voalohany modely, dia ho mihazakazaka amin'ny fotoana ara-dal?na be tafiditra.
Tamin'ny fotoana ny zava-nitranga, no ara-dal?na fandidiana aho ity dia toy izany koa mihazakazaka isnt modely. Inona no nanao hoe: Xintai sy ny quasi-Xintai, koa ny modely malaza toy ny takelaka modely, hoy hihazakazaka na dia ny handao ny manolotra bebe kokoa noho ny mahazatra. Fa toy izany ny zava-misy avy amin'ny zava-nitranga sahy hanahafana ny modely dia ny zava-misy fa hetsika ho izay te-hanao be payout antso.
koa mba hijery ny fomba lehibe ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko manontolo ny hetsika, dia ny fomba fijery izay mampiasa tsara. Tamin'ny fotoana toy izany fisehoan-javatra lehibe, azo inoana kokoa ho avy hanokatra iray manontolo fanitsiana koa ny fantsika. Tsy araka ny tombon-dahiny modely hetsika, miaraka amin'ny vondrona vitsy monja ao amin'ny ara-dal?na fanitsiana fantsika, ny hafa tanteraka isika misokatra matetika.
latabatra hisafidy hoe, hijery ny tahirin-kevitra, fa tsy mijery ny fantsika, dia milaza fa ny olona izay hijery ny alon-sehatra mety ho laharam-pahamehana. Amin'izany fomba izany, toy izany koa ao amin'ny hetsika ny modely, dia mety hifidy ny iray tombon-dahiny maro sitrana soa fitaovana na milina maro famoahana mamantatra tsara amin'ny fandresena indrindra miovaova isan-jato. D_ latabatra hisafidy hoe hijery ny tahirin-kevitra, fa tsy mijery ny fantsika, dia milaza fa ny olona izay hijery ny alon-sehatra mety ho laharam-pahamehana. Amin'izany fomba izany, toy izany koa ao amin'ny hetsika ny modely, dia mety hifidy ny iray tombon-dahiny maro sitrana soa fitaovana na milina maro famoahana mamantatra tsara amin'ny fandresena indrindra miovaova isan-jato. D_ latabatra hisafidy hoe hijery ny tahirin-kevitra, fa tsy mijery ny fantsika, dia milaza fa ny olona izay hijery ny alon-sehatra mety ho laharam-pahamehana. Amin'izany fomba izany, toy izany koa ao amin'ny hetsika ny modely, dia mety hifidy ny iray tombon-dahiny maro sitrana soa fitaovana na milina maro famoahana mamantatra tsara amin'ny fandresena indrindra miovaova isan-jato.